Kutuswa owesilisa ofe nezinswelaboya ebezimduna imoto - Ilanga News
Home Izindaba Kutuswa owesilisa ofe nezinswelaboya ebezimduna imoto
Sishayelwa ihlombe isibindi sowesilisa waseManguzi ofe elwa nezigebengu ebezizama ukumphuca imoto endaweni eyisizinda sokuweliswa kwezimoto ezebiwe ziyiswe eMozambique.
WETHULELWE isigqoko njengeqhawe owesilisa waseManguzi ophangalale emuva kokubhekana ngqo ngenhlamvu nezinswelaboya ebezihlome ngezibhamu obekhukhona kuzona ne-AK47, zimduna imoto ngoMgqibelo kule ndawo eyisizinda sokuweliswa kwezimoto ezebiwe ziyiswe eMozambique.
Izigebengu ezimbili kwezintathu zisale enkundleni kulokhu kudubulana. UMnu Doctor Tembe (30), waseThengani, eManguzi, kuthiwa ubehamba ngeBMW 3 Series yakhe nowesifazane othile, ngesikhathi bevukelwa ngamadoda amathathu abakhomba ngezibhamu, amyalela ukuba aphumele ngaphandle.
Kubikwa ukuthi udonse isibhamu sakhe wangabe esabuza mkhuhlane, wavulela ngenhlamvu ebhekise kubasolwa nabo abangalindanga ibhadi, badubula.
Umthombo weLANGA uthi uMnu Tembe ushonele egcekeni lomuzi abesebalekele kuwona eyocela usizo kanti omunye umsolwa ubanjwe ngeSonto ehobe ehlathini, amathumbu evele ngaphandle ngenxa yokudutshulwa.
“Kudala sikhala ngenkinga yokwebiwa kwezimoto lapha endaweni yethu, umfana wakwaTembe simfanisa neqhawe ngoba usize abaningi,” kusho umthombo.
Iphoyisa elingagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba esiteshini saseManguzi, liveze ukuthi abafi bebevele befunelwa olunye uxhaxha lwamacala okuntshontsha izimoto nokubamba inkunzi.
“Sithole ukuthi yibo laba bantu esihlala sibafuna, omunye wabashonile unecala lokuntshontsha imoto alenza eThekwini. Lona omunye usanda kuntshontsha imoto engazi ukuthi inamakhamera, ngikhuluma nje sinezithombe zakhe ebaleka nayo leyo moto yomlungu. Lona omunye simthole amathumbu evele ngaphandle,” kusho leli phoyisa.
UNkz Hlengiwe Tembe ongudadewabo kaMnu Tembe, utshele ILANGA ukuthi umfowabo ubesemakhaya evakashile njengoba ehlala eThekwini ngokwetoho lakhe lokuba unogada.
“Sizwe sesithintwa ngabantu befonela ubhuti omdala bethi makaphuthume emgwaqweni. Sifike umfowethu eseshonile, kodwa akashonanga yedwa ubulele nabanye abantu.
“Sizwile ukuthi abantu ababulele bebezama ukumphuca imoto yakhe. Sigqemeke enkulu ingozi ngokwenzekile ngoba ubewusizo lapha ekhaya,” kusho uNkz Tembe.
UMnu Joseph Ngubane ongusihlalo wekomidi elilwa nobugebengu eMkhanyakude, uthe ubengakayitholi imininingwane ephelele ngalolu daba.
“Ngizwile nje kancane kukhulunywa ngalesi sigameko. Kubalulekile impela ukuthi umuntu azivikele uma ehamba ngemoto yakhe ngoba kayifuni ukuphela le nkinga yokwebiwa kwezimoto zethu nezabantu abasuke beze ngokuvakasha kule ndawo yethu,” kusho uMnu Ngubane.
UMnu Juda Mthethwa oyilungu lomphakathi waseManguzi elihola uphiko olulwa nobugebengu kule ndawo, usishayele ihlombe isenzo sikamufi.
“Sikhathazekile ngenkinga yokwebiwa kwezimoto lapha endaweni. Okubuhlungu wukuthi ezinye zalezi zimoto zebiwa kwezinye izifundazwe besezizokhishwa lapha. Kubalulekile ukuthi umuntu ayivikele imoto yakhe njengoba ekwenzile lokho umfo kaTembe,” kusho uMnu Mthethwa.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, uthe kuvulwe amacala awu-5 okungelokubulala nelokuzama ukubulala, elokufa kwabantu, elokuduna imoto nelolutholakala nezibhumu ezingekho emthethweni.
Wonke la macala aphenywa esiteshini samaphoyisa aseManguzi. Uthe imbangela yesigameko kube wukuthi kukhonjwe umshayeli ngesibhamu wayalelwa ukuba aphumele ngaphandle, okuthe uma ephuma waqala wadubula.
“Umshayeli wemoto uphume emotweni wadubula esifubeni oyedwa wabasolwa washona. Omunye abenaye ushonele khona endaweni yesigameko.
Umsolwa oneminyaka ewu-29 ubudala utholwe ngamaphoyisa ehlathini wathathwa waphuthunyiswa esibhedlela, kuyimanje uqashwe ngamaphoyisa. Owesifazane obekhona kwenzeka isigameko uyelulama,” kusho uColonel uMbhele.
Previous articleKuphume izidumbu ecasulwa yiziqashi
Next articleKugqabuke igoda kumaZulu neMabhida